hanmyowin၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
saimaw သည်hanmyowin's ၏ 'ဘုရားဂုဏ်တော် ၉ ပါး။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
saimaw သည် hanmyowin's၏ 'ဘုရားဂုဏ်တော် ၉ ပါး။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"သာဓု သာဓု သာဓု ... ​ကျေးဇူးအထူးပါ တယ်​ခင်​မျာ"
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်hanmyowin's ၏ 'ထင်ရှားသောဆရာတော်ကြီးများ၏ သြ၀ါဒများ(၁)။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်hanmyowin's ၏ 'ထင်ရှားသောဆရာတော်ကြီးများ၏ သြ၀ါဒများ(၂)။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်hanmyowin's ၏ 'ထင်ရှားသောဆရာတော်ကြီးများ၏ သြ၀ါဒများ(၃)။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
phyuthi သည်hanmyowinကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Maung Lwin သည်hanmyowin's ၏ 'ဘုရားဂုဏ်တော် ၉ ပါး။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
hanmyowin shared thein wai's blog post on Facebook
၀က်ဝံကြီးပြောသွားတဲ့ မှတ်သားစရာ စကားတစ်ခွန်း။
hanmyowin သည်thein wai's ၏ '၀က်ဝံကြီးပြောသွားတဲ့ မှတ်သားစရာ စကားတစ်ခွန်း။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
U Tin Zaw သည် hanmyowin's၏ 'သိင်္ဂါလသုတ်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Angledaewi သည် hanmyowin's၏ 'သိင်္ဂါလသုတ်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Min Aung သည် hanmyowin's၏ 'ရွှေဥမင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဆုံးမသြ၀ါဒ လက်ရေးမူ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု။ "www.facebook.com/drminaung"; မှာ "တိုးတက်သောလူမျိုးသည် စာဖတ်ကြ၍ စာဖတ်သောလူမျိုးသည် တိုးတက်ကြသည်၊" ကို ကူးယူပြီး ဆောင်းပါးကိုလည်း လင့်ချိတ်လိုက်ပါသည်။"
The Essence"ဘ၀ကို အလင်းပေးတဲ့ အလင်းစက်""I have created this blog for the benefit of readres.If anybody learns something good, that is what I expect. May all beings be well and happy! "Wednesday, May 15, 2013သိင်္ဂါလသုတ်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း၊၊ ၊၊နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်များတွင် တက်ရောက်ပညာသင်ယူကြသည့် ကျောင်းသားများသည် အတန်းဆုံးတွင် ဘွဲ့ယူကျမ်းစာ တင်သွင်းကြရပါသည်၊၊ဘွဲ့ယူကျမ်းစားတင်သွင်းရာတွင် စာစီစာကုံးပုံစံ“Essay Type”နှင့်၊ သုတေသနပုံစံ“Thesis Type” နှစ်မျိုးတွင် သင့်တော်သလိုတက္ကသိုလ်မှ…See More
hanmyowin သည်လှိုင်ကျော်ထွေး's ၏ 'ကျေးဇူးရှင် ဆားတောင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သြ၀ါဒတော်များ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
noonsifha သည်hanmyowin's ၏ 'ရွှေဥမင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဆုံးမသြ၀ါဒ လက်ရေးမူ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
6:40pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 26, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
2:54pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 26, 2012, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
1:50pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 26, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မွေးနေ့ မင်္ဂလာပါညီရေ.....လိုအင်ဆန္ဒတွေ တလုံး တဝထဲး ပြည့်ပါစေလို့အကိုဆုတောင်းပေးပါတယ်
11:50pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 24, 2011, တွင်ူလပြည့်ဦး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
6:37pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 26, 2011, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
"ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေရှင်"
8:30pm အချိန်သြဂုတ် 21, 2011, တွင် စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
7:49pm အချိန်သြဂုတ် 21, 2011, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဒီဘလော့ကို ဇူလှိုင် 7, 2013 တွင်12:00am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments0Likes
သိင်္ဂါလသုတ်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း၊၊ ၊၊…
ဒီဘလော့ကို ဇူလှိုင် 5, 2013 တွင်12:44am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments3Likes
ကိုယ်တည်းတစ်ယောက် ချမ်းသာရောက်ဖို့ ခုလောက်ကြိုးကုတ် အားမထုတ်ဘူး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ
သာသနာ၏ ရှေးခါဘိုးဘ လက်ထက်ကလျှင် ရသည်တန်ခိုး ထပ်မညှိုးအောင် အားကြိုးမာန်တက်
ငါဆောင်ရွက်သည် ဆက်လက်တည်တံ့ရုံသာတည်း။(တစ်ဘ၀သံသရာ-စာ ၃၈၉)
ကိုယ်တည်းတစ်ယောက် ဆင်းရဲရောက်လို့ ကိုယ့်နောက်အများ ချမ်းသာပွားမူ တစ်ပါးဖြစ်ထွေ
ဆင်းရဲစေတော့ စိတ်နေခုလို ၀မ်းဝယ်သို၍ ထိုထိုအလုပ် လွန်ကြိုးကုတ်သော် မဟုတ်သတင်း
ဒီဘလော့ကို ဇူလှိုင် 5, 2013 တွင်12:25am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments2Likes
နံနက်ခင်း နေရောင်ခြည်ကလေးသည် တစ်နေ့လုံးရှိနေမည်မဟုတ်၊
သင့်ဘ၀ကိုချစ်မြတ်နိုးလျှင် အချိန်ကိုအလကား မဖြုံးတီးမကုန်ဆုံးပါစေနှင့်
ကုန်ဆုံးသွားသော အချိန်ကို ဘယ်တော့မှပြန်မရနိုင်၊
အိပ်ရာထနေမြင့်သောသူသည် တစ်နေ့လုံး လမ်းသွားရတတ်၏၊
သူများအတွက် ကောင်းသောအပြုအမူကို လုပ်တတ်သူသည်
ဘုရားဂုဏ်တော် ၉ ပါး။
ဒီဘလော့ကို ဇူလှိုင် 4, 2013 တွင်12:00am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment7Likes
ကိလေသာကင်းစင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရား။လူမင်းနတ်မင်းဗြဟ္မာမင်းနှင့်တကွ လူနတ်ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါအားလုံးတို့၏ပူဇော်အထူးကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရား။